Arụpụtara site Apple, iPhone na-touted dị ka otu onye nke ụwa kasị ewu ewu na touchscreen smart igwe na-agwakọta bụ isi arụmọrụ nke a na ekwentị mkpanaaka na ndị ọzọ elu functionalities, dị ka weebụ nchọgharị, panoramic foto na GPS. Ọ bụghị naanị na ọ ekwe ka onye ọrụ na-eme multitask, ọ na-enye ohere onye ọrụ iji hazie ihe handset dị ka ọ bụ a onye kọmputa na ọ laa. All iPhone ọrụ nwere ike hazie ha onwe ha handsets site na nbudata na ịzụta ngwa ọdịnala si App Store. E nwere ihe karịrị otu nde ngwa ọdịnala na App Store si image nhazi software na-ahazi ego nsuso ngwaọrụ. Ị pụrụ ọbụna iji iPhone dị ka a n'ụlọ nche ngwaọrụ.
iPhone maka Home Nche
Nyere ọtụtụ ihe ojiji nke iPhone, ọ na-abịa dị ka ọ na anya na a ọhụrụ ìgwè nke smartphone ngwa e mepụtara lebara nchegbu nke n'ụlọ nche ma na-enyere homeowners remotely nyochaa ha Njirimara na iji gwa ha ma ọ bụrụ na e nwere nsogbu.
E nwere ugbu a ihe karịrị otu narị n'ụlọ nche ngwa dị na App Store. Ọ bụrụ na ị na-ahụ ya ike kwere, na-agbalị na-eme a ngwa ngwa search na 'n'ụlọ nche' dị ka gị isi ahịrịokwu, na ị ga-ahụ na e nwere 693 results. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe nile search rụpụtara na-emetụtachaghị 'n'ụlọ nche', e nwere ọtụtụ nke ngwa na-maa kwesịrị apụ.
Ụfọdụ nwere ike ịchọ mmezi ngwá dị ka video ese foto mgbe ndị ọzọ na-kpam kpam free. Mgbe niile, ebe ọ bụ na Kacha ọhụrụ iPhones na-onwem na 8-megapixel igwefoto na ihe aperture nke f / 2.2, nanị ihe ọ na-eme uche maka iPhones okpukpu abụọ dị ka a nche igwefoto, dị ka mma.
The kasị dị ịrịba ama iPhone ngwa ọdịnala n'ihi Home Nche:
iSentry bụ a free iOS na ngwa na-enye ohere ọrụ ka kama gbanwee ha kọmputa n'ime a motion-ịmara na nche usoro. Niile i nwere ime bụ download ngwa, na-arụtụ gị igwefoto n'ógbè ị chọrọ nyochaa, na-amalite na-anata ihe oyiyi na obere vidiyo ozugbo ngagharị achọpụtara. The iSentry na-abịa na a dum nhọrọ nke ntọala na-enye gị ka ịtọọ oge ebighị oge, nwee ụda alerts na-enweta email Ịma Ọkwa.
Ọnụnọ bụ a free iOS na ngwa na-amama ochie Wi-Fi-nyeere Apple ngwaọrụ n'ime n'ụlọ nche ese foto. Ihu ọma, niile i nwere ime bụ download ngwa ngwaọrụ abụọ. Otu ngwaọrụ ga-eme ihe dị ka a igwefoto ka ndị ọzọ na-eje ozi dị ka ileba anya. Ị nwere ike ịtọlite ​​igwefoto ngwaọrụ nta ka ọ bụla nke ebe obibi na ị chọrọ ịnọgide na-anya na, mgbe ahụ, i nwere ike iji gị ndị ọzọ iOS ngwaọrụ nyochaa igwefoto ndepụta na ozugbo. Na ngwa na-onwem na a ngagharị detector mma nke ga-nche gị ma ọ bụrụ ihe na-akpali n'ihu igwefoto. Ọ ga-akpaghị aka na-ezitere gị a ise na abụọ video clip site email, otú ị ga-na-anọ n'elu gị n'ụlọ nche ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụ na-arụ ọrụ ma ọ bụ azụmahịa nzute.
Ọnụ na $4.99, na iCam ohere ọrụ jikọọ ndụ video na ọdịyo na-azụ n'ihi na ruo 16 iOS ngwaọrụ niile ozugbo. Ọ na-arụ ọrụ yiri nnọọ ka Presence ma-enye ohere maka ihe ngwaọrụ ike jikọọ n'otu oge.
Dị nnọọ ka Canary, ị nwere ike eji naanị DropCam ngwa mgbe ị na-azụ ha igwefoto na ejikọta ya otu n'ime gị iOS ngwaọrụ. Ọ na-ewe agaghịkwa karịa 60 sekọnd ịtọ ya. Ozugbo igwefoto arụnyere na ngwa arụnyere na melite na ekwentị gị, ị nwere ike ịlele niile vidiyo na na ekwentị gị. Ndị a nwekwara ike-e dere na-azọpụta maka mgbe e mesịrị ikiri. Plus, na video iyi nwere ike na-akọrọ gị na ezinụlọ gị na ndị enyi, na Anglịkan. Ọzọkwa, DropCam a kwadebere n'ụzọ na abụọ na-ụzọ ụda, otú i nwere ike iji ya dị ka nwa ọhụrụ ileba anya ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ otú ị na-amasị ya. Ọ na-abịa na dijitalụ mbugharị arụmọrụ, otú i nwere ike anya nyochaa a kpọmkwem ebe gị ụlọ gị.
Mmụọ nsọ site Apple si imewe ụkpụrụ, na iSmartAlarm bụ a do-ya-onwe gị nche usoro na-enye ohere ka i nyochaa n'ụlọ gị gị na-eji naanị a ngwaọrụ akpọ CubeOne na gị iPhone. The CubeOne eme ka ụbụrụ nke nche usoro na ọ bụ maka apostle na 'ụjọ' mkpu. Ị nwere ike ịchịkwa ya n'ebe ọ bụla gburugburu ụwa na-eji gị iPhone. iSmartAlarm na-ere a igwefoto na ike Pan, tilt na bugharia oghere iji nweta a 350-ogo echiche nke ụlọ. Ya oghere bụ kpuchie ke a doro anya plastic shei na-echebe ya site na mmiri, mmebi, uzuzu, na lint. N'otu aka ahụ, ị ​​pụrụ ịchịkwa a na-eji gị iPhone.
Ụbọchị ndị a ị na-adịghị mkpa n'ezie itinye ego na ihe dị oké ọnụ n'ụlọ nche usoro-na taabụ na n'ụlọ gị gị na 24/7. Ugbu a, na kpatụ aka gaa na nke mkpịsị aka gị, ị nwere ike mfe ibudata ihe iPhone ngwa ma ọ bụ abụọ na-enye gị na-anya na gị na n'ụlọ si n'ebe ọ bụla na ị bụ.
Ma ị chọrọ ego ma ọ bụrụ na gị na ụmụaka mere ya si ụlọ akwụkwọ n'enweghị, ma ọ bụ na-ahụ na ụlọ gị na-echebe ọ bụla na ohi ahụ e zuru ma ọ bụ na iwu akwadoghị okpukpu-ins, ọ bụghị ya dị otú ahụ a enyemaka mara na n'ụlọ nche dị n'ọbụ aka aka gị?
> Resource> iPhone> Atụmatụ maka Olee otú Jiri iPhone Ejikwa Home Security System